पृथ्वीको एक भाग तीव्र गतिले चिसो भइरहेको छ’ अब के हुन्छ? – Namaste Host
April 4, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on पृथ्वीको एक भाग तीव्र गतिले चिसो भइरहेको छ’ अब के हुन्छ?
काठमाडौ। अर्बौं जीवको वासस्थान रहेको पृथ्वीको एक भाग अर्को भागको तुलनामा अत्यन्त छिटो चिसो” भइरहेको तथ्य पत्ता लागेको छ।
नर्वेस्थित ओस्लो विश्वविद्यालयले हालै गरेको एक शोधमा अफ्रिकी भू-भागको तु’लनामा प्रशान्त महासागरको भूभाग छिटो चिसो हुँदै गइरहेको थाहा हुन आएको छ। यस अनुसन्धानमा ४० करोड वर्षसम्मको मोडल र डाटालाई कम्प्युटरका माध्यमले अवलोकन गरिएको थियो।
उक्त मोडल र डाटाको आधारमा कुन गोलार्द्ध महाद्विपीय पिण्डभन्दा कति अलग थियो भन्ने गणना गरिएको थियो।
यो शोध हालै ‘जिओफिजिकल रिसर्च लेटर्स’ (Geophysical Research Letters) मा प्रकाशित छ। वास्तवमा पृथ्वीभित्र एक प्रकारको” रातो र तातो लेदो (रेड हट लिक्विड) पदार्थ हुन्छ। यसले सम्पूर्ण ग्रहलाई भित्रबाट तातो बनाएर राख्ने काम” गर्छ।
वैज्ञानिकहरुले कुनै उपायबाट मङ्गल ग्रहमा अक्सिजन निर्माण गर्ने हो भने पनि सबैभन्दा ठूलो’ स:मस्या के रहेको छ भने यसरी निर्माण गरिएको अक्सिजन मङ्गल ग्रहको सतहमा बाँधिएर रहँदैन र यो सबै अक्सिजन ‘अन्तरिक्षमा पुग्छ। शोधमा समुद्री सतहको तुलनामा जमिनले धेरै
तापक्रम रोक्ने गरेको थाहा हुन आएको छ। शोधबाट करोडौँ वर्ष पहिला कुनै समयमा प्रशान्त महासागरको भाग अहिलेको तुलनामा धेरै तातो थियो भन्ने पनि जानकारी प्राप्त भएको छ।